कुन रोगका कारण कहाँ आउँछ डण्डिफोर ? हटाउने सजिलो तरिका – Gorkhali Dainik
March 30, 2021 559
अधिकांस किशोर र वयस्कलाई डण्डिफोरको समस्या हुने गर्दछ । हर्मोनल परिवर्तन र बाह्य कारकतत्व डण्डिफोरको साधारण कारण हुन्। यो अप्रिय स्थितीको असर तपाईंको आन्तरिक स्वास्थ्यमा पनि पर्न सक्छ । डण्डिफोर विशेषगरी अनुहारमा आउने गर्दछ । यही डण्डिफोर तपाईंको आन्तरिक स्वास्थ्यको चित्रणसमेत हो । कुनै व्यक्तिहरुलाई डण्डिफोरले निकै सताइरहेको हुन्छ, यसको कारण बारे थाहा नभएर उचित उपचार पनि गर्न सकिरहेका हुँदैनन् ।
काठमाडौँ, गायिका ज्योति मगर समय–समयमा चर्चामा आइरहन्छिन् । स्टेज प्रस्तुति, कपडा पहिराई, विभिन्न पकृतिका अभिव्यक्तिलगायतका कारण उनी चर्चामा आइरहन्छिन् । उनको नीजि जीवनबारे जान्ने इच्छा धेरैलाई हुनसक्छ ।
जान्ने इच्छा हुनुपनि अस्वभाविक होइन । किनकी ज्योति एक ‘चर्चित’ गायिका हुन् । उनका हजारौं समर्थक छन् । लोकगायिकाको रुपमा चर्चित उनी म्युजिक भिडियो अभिनय तथा स्टेज पर्फमेन्समा बोल्ड अवतारको कारण पनि चर्चामा हुन्थिन् ।
त्यसैले त ‘डान्सिङ विथ दि स्टार्स नेपाल’ उनी आफ्नो छवि परिवर्तन गर्न मात्र शोमा उनी सहभागी भएको आरोप पनि लाग्यो । उनी भने आफुमा रहेको बहुमुखी प्रतिभा प्रस्तुत गर्न शोमा सहभागी भएको बताउँछिन् ।
यसैबीच, ज्योतिको विवाह भएको होला नहोला ? उनले यो प्रश्नको सामना कयौं ठाउँमा गरेकी छन् । उत्तर भने स्पष्ट रुपमा दिएको सुनिदैंन । आज भने उनले सबैलाई प्रष्टरुपमा यसको जवाफ दिएकी छन् । ज्योतिले आफ्नो विवाह नभएको बताएकी हुन् ।
Prevनेपाली गोलकिपर किरण चेम्जोङ अन्तर्राष्ट्रिय लिगको बेस्ट गोलकिपर घोषित ! बधाई दिदै एक सेयर गरौं
Nextफेरी अर्की बेहुली भाइरल, विदाई पछि मुस्कुराउँदै जव वेहुली नै कार चलाएर वेहुलाको घर हिडिन् (भिडियो हेर्नुस्)
खु’सिको खबर:नेपाली युवाले र’केट प”रिक्षण गरे, यसरी उड्यो रकेट भिडियोमा हेर्नुस।
यीनै हुन बला’त्कृत म’हिलालाई न्या’य दिलाउन दुई क’रोडको जागिर छोड्ने व’किल…
हरेक १० मध्ये एक व्यक्तिमा कोरोना हुनसक्छ….:::डब्ल्यूएचओ
BREAKING NEWS: नेपालमा भित्रियो नयाँ भाइरस, भोलि देखि १ महिना सम्म लकडाउन, पुरा हेर्नुहोस् (3610)